Kay September 17, 2009 at 5:41 PM
အဲဒါ ဆို..ဒီ အော်ဒစ်တာ လူပျိုကြီးက..တော်တော် အစွဲ အလန်းကြီးမယ် ထင်တယ်။း)
စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ လက်မှတ်ကလေးတစ်ခုကို စွဲလမ်းမိတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်း။ ဟုတ်တယ်ဗျာ။ တစ်ခါတစ်လေကျ ဘာကြောင့်အဲ့ဒီ အသေးအဖွဲလေးကစ စွဲလမ်းမိစေသလဲမသိဘူးဗျာ။
SDL September 17, 2009 at 5:48 PM
လက်မှတ်ကလေးက သေသေသပ်သပ်၊ လှလှပပကလေးဆိုလို့ ကိုယ့်လက်မှတ်ကိုယ် ပြန်တွေးကြည့်ရသေး...ဟိ
momiji September 17, 2009 at 6:12 PM
အမ... ဖတ်ကောင်းတယ် စွဲဆောင်မူအပြည့်..
အမရေ.. လက်မှတ်က လူတယောက်မှာ အရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ ကျနော်ဆို လက်မှတ်စထိုးပီဆိုကတည်းက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းထိုးတော့တာ.. စာအုပ်တွေထဲကအတိုင်းပေါ့..အဲဒီလိုလူတယောက်ရဲ့ စိတ်ကို ခန့်မှန်းလို့မရနိုင်ဘူးထင်တယ်။
ခန့်မှန်းလို့ရတာ လက်ရေးဖြစ်နိုင်မယ်.. ဘာလို့ဆို ကျနော် လက်ရေးကိုတော့ လိုချင်တဲ့ပုံစံ မပြင်နိုင်သလို စာရေးတိုင်း အထက်ကို စောင်းသွားတာကို မညှိနိုင်ခဲ့ဘူး..။
အမ ကို ပြောပြတာပါနော်..
အမ၀တ္တုက သတ်သတ်ပါ..အမဝတ္တုက ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်.. မီးမီးကြိုက်ကြိုက်ပါ
rose of sharon September 17, 2009 at 9:43 PM
မေငြိမ်း September 17, 2009 at 9:52 PM
myo September 17, 2009 at 10:50 PM
မမသက်ဝေ ဆီကို လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာရွက် ပို့ပေးလိုက်မယ်.. စာရင်းစစ်ကြီးကို ပြပြီးမေးပေးပါ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ပါလို့..ဟိ
PAUK September 17, 2009 at 10:58 PM
ကဘောက်တိ..ကဘောက်ချာ နိုင်တဲ့ လက်မှတ်မျိုးပေါ့..
khin oo may September 17, 2009 at 11:55 PM
စ်ိတ်မကောင်းစရာ. ဘာပြုလို့များ ဒီလောက်တောင် လု့ပ်ရှားမှုတွေ နေူးရတာလဲ။
Rita September 18, 2009 at 12:07 AM
ကိုယ့်လက်မှတ် ကိုယ့်ဘာသာတောင်မူးတယ် မမ
သီဟသစ် September 18, 2009 at 12:53 AM
စွဲလန်းတတ်လွန်းသူ တစ်ယောက်အကြောင်း ဖတ်သွားပါတယ်။
လက်မှတ်လှလှရှင်းရှင်းလေးတွေ မြင်တိုင်း သဘောကျတယ်
မီယာ September 18, 2009 at 4:12 AM
လက်မှတ်လေး တခုကလည်း အတော် ဆွဲဆောင်နိုင်သားနော်... ခုထိ ကိုယ့်လက်မှတ်ကို စိတ်တိုင်း မကျသေးဘူး။ လက်မှတ် ပုံစံ အမျိုးမျိုး အကြောင်း ဖတ်ဖူးတယ်...
Thant September 18, 2009 at 9:53 AM
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကောင်မလေး မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ကျမှတွေ့ရတယ်လို့..သနားပါတယ်.. :(
tg.nwai September 18, 2009 at 5:35 PM
ကောင်းတယ် သက်ဝေရေ..စိတ်ဝင်စားပြီး စိတ်လောနေတာနဲ့ တအားအပြေးဖတ်မိသွားတယ်..နောက်မှ တခါ ပြန်ဖတ်ရတယ်..
ဟုတ်တယ်.. လက်မှတ်တွေကလည်း တနည်းနည်းတော့ သူတို့စိတ် တစိတ်တဒေသကို ဖော်ပြတယ် ထင်တာပဲ။
Moe Cho Thinn September 19, 2009 at 3:08 AM
ဒီလောက် စိတ်ဝင်စားတာ တနှစ်ကြီးတောင် စောင့်ရသလား။ ချိုသင်းသာဆို နောက်တနေ့ အဲဒီရုံးကို အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ သွားပစ်လိုက်ပြီ။ :)
ချိုသင်းလက်မှတ်သာဆိုရင် ဘယ်သူမှ စိတ်ဝင်စားမယ် မထင်၊ Rita လို မမူးလောက်ပေမဲ့ မြန်မာလို ရိုးရိုးကြီး ထိုးမိတာ ခုထိ။
ကြည် September 19, 2009 at 2:18 PM
Anonymous September 20, 2009 at 12:27 PM
"...ညနေပိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းတယောက်က နောက်တနေ့ ROM (Registry of Marriage) မှာ လက်ထပ်လက်မှတ် ရေးထိုးရန်ရှိသဖြင့် ...."
ဆိုတဲ့နေရာအရောက်မှာ လက်မှတ်ပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာခန့် မှန်းလို့ ရသွားတယ်ဆိုတော့ နောက်ပိုင်း
Hmoo September 22, 2009 at 8:47 AM
Pretty & professional signature...:)
တန်ခူး September 22, 2009 at 1:37 PM
ADDRESSEE September 26, 2009 at 12:32 AM
Steve Evergreen September 27, 2009 at 2:27 AM
အရှည်ကြီးပဲ နောက်တခေါက် ပြန်လာပြီး ဖတ်ဦးမယ်။ အရေးအသားကို စမ်းစစ်ချင်လို့
ရွှေပြည်သူ October 6, 2009 at 8:03 PM
ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လုံးကိုက လက်မှတ်လေးအတိုင်းပါပဲ။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ဖတ်သွားပါတယ် အစ်မသက်ဝေ...
သက်ဝေ October 6, 2009 at 10:05 PM
ကိုယ်ကတော့ လူတယောက်ကို စိတ်ဝင်စားရင် သူ့ရဲ့ လက်ရေးနဲ့ လက်မှတ်တွေကို ကြည့်ဖို့လဲ စိတ်ဝင်စားမိတယ်... အဲဒီ လက်ရေးလေးတွေနဲ့ လက်မှတ်လေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ရင်ထဲက ပုံရိပ်တွေကို တစေ့တစောင်း ဖေါ်ပြနေတယ်လို့လဲ ခံစားရလို့ပါ။
ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးဖို့ အတွေးရသွားတာက ကိုယ့်အတွက် ညီမလေးလို သူငယ်ချင်းလို ချစ်ခင်ရသူ တယောက်ရဲ့ လက်မှတ်ကလေးကို သိပ်မကြာသေးတဲ့ ရက်ပိုင်းလေးကမှ အမှတ်မထင် တွေ့လိုက်ရလို့ပါ။
ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက် ရင်းရင်းနှီးနှီး နီးနီးကပ်ကပ် ရှိနေခဲ့ကြတာ ၇ နှစ်ကျော်ပြီ...။ အပြင်တွေ အတူတူ သွားလိုက်ကြ အတူတူ စားလိုက်ကြ၊ ဖုန်းတွေပြောလိုက်ကြ၊ အချိန်မရှိ အချိန်ရှိလဲ အွန်လိုင်းမှာ စာရိုက်လိုက်ကြ၊ မေးလ် ပို့လိုက်ကြနဲ့ နေခဲ့တယ်ပေါ့...။
ဒီလို ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းတွေ လွှမ်းမိုးတဲ့ ကာလကြီးမှာ သူ့ရဲ့ လက်ရေးနဲ့ လက်မှတ်လေးကို တွေ့ဖို့ရာ အကြောင်းမကြုံကြိုက်ခဲ့လို့ အရင်က မတွေ့ဖူးဘူး။ သိပ်မကြာသေးတဲ့ နေ့ကမှ တွေ့ခဲ့ရတာ...။ (သူ့လက်မှတ်လေးက Very neat & tidy ပါ...)
သူ့ လက်မှတ်လေးကိုတွေ့တော့ ပြောမိတယ်...
“ကျုပ် ရှင့် လက်မှတ်လေးကို အခုမှတွေ့ဖူးတာ နော်...” လို့။ ဒီတော့ သူက ပြန်ပြောတယ်...
“ဟုတ်တယ်လေ သူများတို့ နှစ်ယောက်က စာချုပ်မှာ လက်မှတ်မှ အတူ မထိုးဘူးတာ...” တဲ့...း))
အဲဒီကနေ ဆင့်ပွားတွေးမိတော့ ဒီပိုစ့်လေး ရလာပါတယ်...။ လက်မှတ်ပိုင်ရှင်လေးနဲ့ အတူ ဒီပိုစ့်လေးကို လာဖတ်ရင်း မှတ်ချက်ရေးသွားကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်...။
T T Sweet October 6, 2009 at 11:05 PM
ရေးထားတာ ညက်နေတာပဲ ။ ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ... ရေးတဲ့အထဲ မျောပါသွားတယ် ... အော် ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုကိုး ...
MinNyo January 16, 2010 at 12:09 AM
You got this idea from your friend's signature. Your friend may be Blogger Pandora.